Naya course » आज कहाँ-कहाँ बाढीको सम्भावना ? आज कहाँ-कहाँ बाढीको सम्भावना ? – Naya course
आज कहाँ-कहाँ बाढीको सम्भावना ?
लगातारको वर्षाका कारण देशका धेरै नदी तथा खोलामा बाढी आएको छ । मनसुन सक्रिय नै रहेकाले आज पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना छ । यसले गर्दा आज पनि ठूला तथा साना नदी, खोलामा बाढीको सम्भावना रहेको विज्ञले बताएका छन् ।